विचार Archives - Diaspora - ONUF - Overseas Nepali Unity Forum - International Committee::Web Magazine
बाग्मती प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले हिजो ११ जून २०२१ का दिन प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्ष्यित गरी “कोही नाथुराम गोडेसे आवश्यकता...
बुद्ध जयन्तीको हार्दिक शुभकामना आज भन्दा पच्चीस् सय पैँसट्ठी वर्ष पहिले नेपालको लुम्वीनीमा जन्मिएका विश्व शान्ति र अहिंसाका प्रतिक सम्पूर्ण चराचर जगतको शान्ति र मानव कल्याणका अग्रिणी पथप्रदशक र प्रेरणाका स्रोत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जीवनको...
मे दिवसको हार्दिक शुभकामना आदरणीय विश्वभरका सम्पूर्ण श्रमिक आमाबुबा, दाज्यूभाई तथा दिदीबहिनीहरु, आज मे १, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, संसारभरका श्रमजीवि वर्गहरुको हक, हित र अधिकारको लागि स्मरण गर्ने महान दिन, यस अवसरमा प्रवास तथा स्वदेशमा...
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी, तथा दाज्युभाईहरु, आज २२ अप्रील, विश्व सर्वहारा आन्दोलनका महान नेता कमरेड लेनिनको जन्म दिवस र नेपाली शोषित, पीडित, किसान, मजदुर तथा सर्वहारावर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको दिन ।...
– कल्पना आङबुहाङ आज भन्दा २ दशकदेखि शुरुआत गरिएको मेलम्ची खानेपानी आज सरकारले भव्य र एैतिहासिक र खुशीयाली पानी पर्वको रुपमा आज सम्मानिय राष्पति बिध्यादेबी भण्डारी मार्फत समुदघाटन भएको छ । बिना पानीको जिन्दगानी कुनै...
विकासोन्मुख देशका संकट टार्ने उपाय
-डा. मुकुन्द बाँस्तोला कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको ठूलो व्यापारघाटा, व्यवसाय बन्द र बेरोजगारीसँग सामना गर्न विकसित देशहरूले आआफ्ना तरीकाले आर्थिक प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन् । तर, कम विकसित देशहरूले अझै बढी उत्तेजनात्मक तरीकाले यस अवस्थासँग जुध्न प्रतिक्रिया...
-डा. मुकुन्द बाँस्तोला कोरोनाले अर्थतन्त्रका मुख्य दुई पक्ष माग र श्रमबजारको आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । साथै, पूर्ण रोजगारी र कुनै पनि लक्ष्य प्राप्तिमा व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गर्ने खालका प्रभावहरू पार्छ । विशेषगरी, यस संकटले...
भक्त गुरुङको नेतृत्वमा नेकपा बेलायत पुनर्गठन
लन्डन । नेकपानिकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च यूके आइतबारदेखि विधिवत विभाजित भएको छ । मञ्चको ओली समर्थक समूहले आइतबार विशेष राष्ट्रिय भेलामार्फत् भक्त गुरुङको नेतृत्वमा संगठन पुनर्गठनको घोषणा गरेको हो । भेलाले १२५ (केहि सदस्य...